History of voalohany cryptocurrency - Vaovao farany - Blockchain News
The boky ny asa Bitcoin: Décentralisées Electronic ny firafitry ny volan'ny mifono mistery mpanoratra Satoshi Nakamoto in 2008 no nanamarika ny fiandohan'ny vanim-potoana vaovao eo amin'ny tontolo vaovao. Nisy crypto-Sandam-bola – ny décentralisées vondrona nomerika ny fikajiana, varotra izay efa voasoratra ao rojo kilalao miendrika biriky.
Bitcoin efa tena lasa voalohany cryptocurrency ampiharina tetikasa
fa ny hevitra ny cryptocurrency hatramin'ny faran'ny taonjato farany masaka ao mihidy faribolana ny cryptographers sy ciprofancks – ny olona liana amin'ny fiarovana ny fiainana manokana. Bitcoin dia antsoina hoe mpanara-dia roa farafahakeliny cryptocurrency rafitra, izay tsy mbola nampiharana. Ny hevitra ny amin'ny “tsy mitonona anarana nizara vola elektronika rafitra” B-vola voalaza ao amin'ny 1998 ny developer Wei Shaddai. Tamin'izay taona, ny mpahay siansa eo amin'ny sehatry ny informatika, Fifidianana Akama sy ny lalàna Nick Szabo nanolo-kevitra ny foto-kevitra momba ny vola Bitgold décentralisées nomerika mampiasa ny Porofo-of-Work rafitra (ny farany dikan-tenin'ny Porofo-of-Asa-protocole dia ampiasaina in Bitcoin).
Satoshi Nakamoto manoratra fa ny asa amin'ny bitcoin Nanomboka tamin'ny 2007. White taratasy bitcoin naseho tao amin'ny mailing list ho an'ny mpandraharaha Oktobra 31, 2008, ary ny voalohany ho sakana in Bitcoin, misy ny voalohany 50 BitCoins, dia novokarin'ny Satoshi tamin'ny Janoary 3, 2009, izay heverina ho ny andro nahaterahan'i ny bitcoin. Ny voalohany dikan-bitcoin rindrankajy dia navoaka tao amin'ny Janoary 9. Ny mpandray ny voaloham bitcoin-barotra, notanterahina Janoary 12, no cipherophone Hal Finney, ny mpamorona ny voalohany reusable Porofo-of-Asa RPOW fifanarahana. Nandritra ny raharaham-barotra Satoshi naniraka Finney 10 BitCoins mba hitsapana ny rafitra. Finney hoy izy “nisambotra ny famoahana rindrambaiko voalohany raha vao nanambara ny Satoshi”: “Heveriko aho no olona voalohany taorian'ny Satoshi izay nihazakazaka Bitcoin,” Hoy i Finney. Rehefa ny mpamorona bitcoin, tsy mampiseho ny maha, misotro ronono in 2011, ny fampandrosoana ny Bitcoin dia naharitra ny rindrambaiko Gavin Andresen (mandra- 2016).
Ny iray amin'ireo hevi-dehibe indrindra indrindra ny bitcoin sy cryptocurrency amin'ny ankapobeny dia ny fiarovana ny ara-bola vaovao
“Ny sisa dia afaka mahita fa misy olona iray fandefasana vola ny olon-kafa, saingy tsy misy vaovao manan-kery ny raharaham-barotra ho any amin-olona,” Hoy ny taratasy fotsy bitcoin. Na izany aza, bitcoin amin'ny ampahany ihany no antsoina hoe tsy mitonona anarana, ary izany dia noho ny mampihavaka ny antsoina hoe “-bahoaka” ady bitcoin: dia miaro ny tantaran'ny varotra rehetra, izay, etsy andaniny, miantoka mangarahara ny asa, fa ny hafa, mamela anao manara-maso ny raharaham-barotra iray manokana tantaran'ny adiresy, izay afaka manampy amin 'ny famantarana ny olona. Teo aloha Edward Snowden mpandraharaha CIA antsoina hoe ny fahirano-bahoaka “ny fahadisoana lehibe maro teo amin'ny trano ny bitcoin” noho ny ara-teknika fetra eo amin'ny fanodinana ny fifanakalozana. “Izany no tsy mifanaraka fotsiny ny rafitra mikendry maharitra varotra, satria azo atao mba hiarovana ny tantara rehetra izay fividianana olona iray nataony teo amin'ny fiainany, manome ny hafa raha miditra amin'ny asa rehetra tanterahana,” hoy izy. Ary tamin'ny volana Martsa, Snowden navoaka miafina antontan-taratasy ao amin'ny National Security Agency (NSA), izay tsy manaraka fa ny sampan-draharaha efa fanaraha-maso ireo mpampiasa bitcoin hatramin'ny fara fahakeliny, 2013.
Nandritra ny fe-potoana 2013-2014, ny fihetsehana ao amin'ny bitcoin antokony dia voamariky ny tafahoatra fikorontanana. Tamin'ny volana Novambra 2013, ny vidin-bitcoin voalohany nandresy ny $ 1000 tokonam-baravarana, rehefa nitombo 5 fotoana eo amin'ny iray volana sy 17 fotoana hatramin'ny volana Jolay 2013. Miantso ny manam-pahaizana roa lehibe antony mipoaka toy izany fitomboana: ny lohataona Cypriot krizin'ny banky sy ny fitomboan'ny fangatahana avy amin'ny Sinoa mpampiasa vola. Na izany aza, Tamin'ny faran'ny 2014, bitcoin lavo tamin ' $ 310.
Na dia izany aza, ny mahavariana vokatry ny 2013 nahasarika ny sain'ny haino aman-jery 'izao tontolo izao, izay nanome tosika lehibe ho amin'ny famotsorana ireo bitcoin avy amin'ny faribolana ny geeks faobe sy ny fizarana, ary koa ny famoronana ny hafa cryptocurrencies.
Mafana: America May Lead Bit...
Next Post:Blockchain News 20.06.2018